MNL Cup 2009 မှာ ပထမဆုဒိုင်းကို ထိုက်တန်စွာ ဆွတ်ခူးရရှိတဲ့ မန္တလေး အခြေစိုက် Yadanarbon FC ဘောလုံးအသင်းရဲ့ Official Website http://www.yadanarbonfc.com/ ဟာ အင်တာနက်မှာ တရားဝင် ပေါ်ပေါက်လာဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်... ဒီ Official website မပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းက Yadanarbon FC fan များ ကလည်း Yadanarbon FC fan website ရေးသားနေကြတယ်လို့ သတင်း ရရှိကြောင်းပါ... ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိ အင်တာနက်ပေါ် လွှင့်တင်ထားခြင်းကို မတွေ့ရသေးပါဘူး...
မန္တလေးမှာ... (Mandalay Gossips)
လူသတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ ကောလာဟလ ထွက်ရှိလာပြန်ပါတယ်... ဒေးဝန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘုန်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု ဖြစ်တယ်လို့ ကြားရှိရပါတယ်... ပြီးခဲ့တဲ့ လအတွင်းကလည်း အလယ်တန်းအရွယ် ကျောင်းသူသတ်မှု၊ စင်တင် တစ်ခုက ဝိတ်တာကို သတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တယ် ကောလာဟလ ကြားရှိခဲ့ရပါတယ်...
မန္တလေးမှာ... (Mandalay Weather News)
မန္တလေးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ရာသီဥတု သာယာခဲ့ပြီး အခု သုံး - လေး ရက်တွင်း ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတု ပြန်လည် ဖြစ်နေပါတယ်... အပူချိန်ဟာ နေ့ဘက်တင်မက ညဘက်ပါ ပူပြင်းလှပါတယ်...
မန္တလေးမှာ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်တာ ၁-လ ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အချို့စားသောက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များကတော့ အခုအချိန်အထိ အသုံးပြုနေကြပြီး အချို့ကတော့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် အစားထိုး ပလတ်စတစ်အိတ်များကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြပါတယ်... ကြွတ်ကြွတ်အိတ် ပုံစံ လက်ကိုင်ပါတဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်များကို အများဆုံး အသုံးပြုလာကြပြီး ဈေးနှုန်းမှာ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ထက် ပိုဈေးကြီးတယ်လို့ သိရပါတယ်... ကြွတ်ကြွတ်အိတ် သုံးစွဲသူများကို ဒဏ်ငွေရိုက် နေတယ်လို့ ကောလာဟလများထွက် ပေါ်နေသော်လည်း သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ပါ သတင်းများအရ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် သုံးစွဲသည်ကို တွေ့ရှိပါက ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းမှုသာ ပြုလုပ်နေကြောင်းနဲ့ ဒဏ်ငွေရိုက်ပါက တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ သိရှိရကြောင်းပါ...
My Labels: Mandalay, News, Gossips, Rumors, Myanmar, Burma, ကောလာဟလ, ကောလဟလ, သတင်း, အတင်း, အတင်းအဖျင်း
မန္တလေးသတင်းများ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ဘော်လုံးကိစ္စ ထပ်သိချင်ပါသေးတယ်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်လေးပေါ့။ မန္တလေးက ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ ဘ၀က တကယ်ပဲ ပြောင်းလဲသွားပြီလား။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တော်လှန်ရေး တကယ်ပဲအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား။ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ကျန်းမာပါစေ။
wonderful information, I had come to know about your blog from my friend nandu , hyderabad,i have read atleast7posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i'm already your rss reader now and i would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanksaton once again, Regards, gossips